Kenya oo Mombaza ku xirtay 18 dhalinyaro ah oo ku eedaysan in ay jimcihii abaabuleen rabashado – Radio Daljir
Diseembar 7, 2013 1:29 b 0
Mombaza, December 7, 2013 – Booliska magaalada Mombaza ee dalka Kenya ayaa xiray dhalinyaro muslimiin ah oo tiradooda lagu sheegay 18, kuwaas oo ku eedaysan in ay abaabulayeen rabshado iyo qalalaaso ka dhaca magaalada xeebta.
Wargayska The standard ee dalka Kenya ayaa xaqiijiyey xiritaanka dhalinyarada muslimiinta ah ee lagu xiray Mombasa, booliska ayaa qaqabtay waxaana haatan ku socda baaritaano.
Masaajidka Sakina ee Mombaza ayaa la sheegay inay dhalinyaradu xoog kula wareegeen shalay oo jimce ahayd, halkaas oo ay imam ka yihiin sheikh Maxamed Idiris iyo Sheikh Maxamed Khaliif oo ka mida culimada Mombaza.
Sakina Mosque ee Mombaza waxaa horay khudbado uga jeedin jiray Sheikh Caboud Rogo oo la dilay sanadkii hore, dhalinta la xiray lama sheegin sababta ay masaajidka ula wareegeen iyo ujeedka ay ka lahaayeen midna.
Warar ayaa sheegaya in hadafkoodu ahaa in ay la wareegaan maamulka guud ee Masaajidka
Booliska Kenya waxay sheegeen in dhalinta la hayo qaybtood ay tababar ku soo qaateen Soomaaliya, isla markaasna lagaba cabsi qabo inay si qarsoodi ah hub ku soo geliyeen magaalada xeebta ah oo ay ka jirto cabsi wayn mudooyinkii dambe.